Entertainment Archives | Page2of 47 | Popular
အနုပညာ အလုပ်စဝင်ကတည်းက Photo Model တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် နန်းသူဇာသီချင်း တွေလုပ်တော့လည်း အားပေးတဲ့ ပရိ သတ်တွေတော့ နန်းသူဇာ ဝမ်းသာမိတယ်။ ပုံမှန်ထက် ပိုအားပေးတဲ့သူတွေ တွေ့ခဲ့တော့လည်း အားဖြစ် တယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်…
"မေမေနဲ့ကအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ သီချင်းလေးတစ်​ပုဒ်​လုပ်​ဖို့ရှိ တယ်။ မေမေအရင်​တုန်းက ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးတစ်​ပုဒ်​ကို နှစ်​ယောက်​အတူတူ ပြန်​ဆိုဖြစ်​မလား၊ ဒါမှမဟုတ်​ သီချင်းအသစ်​တစ်​ပုဒ်​ကို..............
အရင်က သီချင်းကောင်းတွေကို ပြန်လည် ဆိုရတဲ့အချိန်မှာ တအားလည်း ပီတိဖြစ်တယ်။ ပြန်ဆိုရတာ တာဝန်လည်းကြီးတယ်။ ကိုယ်ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ကြားဖူးနားဝရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ။ သီချင်းတွေကို အထပ် ထပ် အခါခါနားထောင်ပြီး သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်လည်းပါတယ်။ ဒီသီချင်းတွေကို .…
အခုနောက်​ပိုင်းမှာ မြန်​မာသံက ထုတ်​လုပ်​မှုလည်း နည်းလာတယိ။ စီးပွားရေးအရ ရှုံးတဲ့အတွက်​ မထုတ်​လုပ်​နိုင်​တော့ဘူး။ မြတ်​ရင်​တော့ လူတိုင်းထုတ်​မှာပဲ . . .
အနုပညာလှုပ်​ရှားမှုတွေတင်​မကဘဲ ကိုယ်​ပိုင်​စီးပွားရေးတွေပါလုပ်​ကိုင်​နေတဲ့ အနုပညာရှင်​ကတော့ တေးသံရှင်​ ဂျင်းနီပါ။ စီးပွားရေးလုပ်​ငန်းတွေ လုပ်​ကိုင်​ဖြစ်​နေတဲ့ အကြောင်းကို တေးသံရှင်​ ဂျင်းနီက ''ပရိသတ်​ကျွေးတဲ့ ထမင်း၊ ဟင်းကလည်း စားလို့ တအားကောင်းပါတယ်​။ တအားမြိန်​ပါတယ်​။ တစ်​ခုရှိတာက ဂျင်းနီက ဈေးရောင်းဈေး ဝယ်​ကို…
အနုပညာအလုပ်​နဲ့ပတ်​သက်​ပြီး နန်းဆု ကို ''သူကလည်း ရုပ်​ရှင်​ပြန်​ရိုက်​ဖို့ အားပေးတယ်​။ သူက သရုပ်​ဆောင်​ဘက်​ကိုလည်း လုပ်​စေချင်​နေတယ်​။ ပရိသတ်​တွေကလည်း ပြန်ရိုက်​စေချင်​ကြတယ်​။ ကိုယ့်ဘက်​က အဆင်​သင့်​ မဖြစ်​သေးတာကြောင့်​ မရိုက်​ဖြစ်​သေးတာပါ . . .
ဇာတ်ကားတွေတော်တော်များများရိုက်ကူးဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ထူးအောင်က ၂ဝ၁၉မှာတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေ တော်တော်များများ ပို လုပ်ဖြစ် မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ မကြာခင် ရိုက်ကူး တော့မယ် ဇာတ် ကားများ သူပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရမယ့် ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း သူကအခုလို ပြောပြလာတာက…
၈၃ကား စလုံး ကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အများစုက ကြည့်ဖို့မလိုအပ်တဲ့ကားတွေပေါ့ နော်။ ဆုအတွက် ကြည့်ဖို့မလို အပ်တဲ့ကားတွေကို ဖယ်လိုက်ပြီး တော့ ကား ၂ဝကျွန်တော်တို့ရွေး ထားတယ်။ အဲဒီကား ၂ဝကို ကျွန် တော်တို့ စကြည့်နေပြီ။…
''ကျန်းမာရေးက အခုအချိန်အထိ ပြန်မကောင်းသေးဘူး။ စစတုန်းက ရိုးရိုးဖျားတာပြီးတော့ အဖျားက ၁ဝ၅ လောက်အထိ ဖြစ်သွားတယ်။ အဖျားက လုံးဝမကျဘူး။ အဖျားမကျတော့ အပူတွေကန်ပြီး အဖုတွေ ထွက်လာတယ်။ ဝက်သက်ပေါက် သလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သေ ပြီဆိုပြီး…
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာ အသင်းက ချီးမြှင့်မယ့် Star Awards ဆုကို လာမယ့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၅ ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပမယ့်နေရာက သုဝဏ္ဏဘူမိ Event Park မှာပါ။ ရုပ်ရှင်အနုပညာ…